३ कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन हुँदै,तपाई पनि आफ्नो सेयर सुरक्षित गर्न तयार हुनुहोस् ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
३ कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन हुँदै,तपाई पनि आफ्नो सेयर सुरक्षित गर्न तयार हुनुहोस् !
काठमाडौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ वटा कम्पनीलाई हकप्रद निष्काशन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । १ डेभलपमेन्ट बैंक, १ इन्सुरेन्स कम्पनी र १ फाइनान्स कम्पनीलाई बोर्डले अनुमति दिएको हो ।
धितोपत्र बोर्डले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकलाई ८० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बैंकले १०ः८ अनुपातमा १०० रुपैयाँ दरको १ करोड ८ लाख ६७ हजार ७९८.५० कित्ता अर्थात १ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपैंया बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । सांग्रिलाको हकप्रदमा प्रभु क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ ।
त्यस्तै प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीले १ः०.३ अनुपातमा १०० रुपैयाँ दरको १२ लाख ८३ हजार ४० कित्ता अर्थात १२ करोड ८३ लाख रुपैंया बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । प्रुडेन्सियलको यो हकप्रदमा एनआइसी एसिया क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धको काम गर्नेछ । बिमा समितिले तोके अनुसारको चुक्ता पुँजी बढाउने अभियानमा रहेको प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सले २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५५ नगद लाभांश दिने घोषणा गरीसकेको छ । कम्पनीले मंसिर १ मा हुने साधारण सभामा उक्त प्रस्ताव लैजाँदैछ ।
सेन्ट्रल फाइनान्सले पनि बोर्डबाट हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएको छ । सेन्ट्रलले बोर्डबाट ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्ने अनुमति पाएको हो । फाइनान्सले २ः१ अनुपातामा १०० रुपैयाँ दरको २६ लाख ३ हजार ३१४.०८ कित्ता अर्थात २६ करोड ३ लाख बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । सेन्ट्रलको हकप्रदमा एनआइबिएल क्यापिटल मार्केटले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ ।
बोर्डले कार्तिक २३ गते यी तीनै कम्पनीलाई हकप्रद निष्काशनको लागि अनुमति दिएको हो ।
प्रकाशित मितिः २०७४ कार्तिक २७
पूर्वाधार विकास सँगै सहकारीमा जाने खाल्टेका सामुदायिक सस्थाहरुको निर्णय
धादिङ । पूर्वाधारको विकाससँगै धादिङ खाल्टेका सामुदायिक संस्थाहरुले सहकारी खोलेर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेका छन्
पारिवारिक आर्थिक सुधारमा कोशेढुंगा सावित हुँदै वित्तीय साक्षरता, बचतकर्ता बढे
सल्यान । छोराछोरीले बाबुआमालाई वृद्धाश्रम पु¥याउँछन् भन्ने सुन्ने बित्तिकै छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१ दहखोलाकी ५५ वर्षीया पार्वती
भोजपुरका दुई वडाका सबै घरधुरी सहकारीमा आबद्ध
भोजपुर । भोजपुरको पूर्वी अरुण गाउँपालिकाका दुई वटा वडाका सबै घरधुरी सहकारीमा आबद्ध भएका छन्
गुल्मीको सहकारीको छोटो अवधिमै रु ४४ लाखको कारोबार
गुल्मी । गुल्मीको एक कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालको छोटो समयमा नै राम्रो आर्थिक कारोबार
शेयर बजार : एक अर्बभन्दा बढीको कारोवार
चीनतर्फको निर्यात सन्तोषजनक :राष्ट्रबैंक
सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउँदै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको दिशामा
–रमेश लम्साल/सिबी अधिकारी काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का नेता योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा
पार्टी एकता पुष्पलालको सपनाअनुसार
–शरद शर्मा काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४० औँ स्मृति दिवस
पर्यटकलाई लक्षित गरी शौचालयसहितको बस सञ्चालनमा
काठमाडौँ । भक्तपुरका पर्यटकलाई लक्षित गरी भक्तपुरदेखि पोखरासम्म सुविधासम्पन्न पर्यटकीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ
विद्युत् र इन्टरनेट सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या
ताप्लेजुङ । जिल्लामा विद्युत् र इन्टरनेट दुवै सेवा ठप्प बनेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
अलैँचीको बजार मूल्य सम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन माग
लमजुङ । नर्सरीमा लगाएका लाखौँ बिरुवा बिक्री नभएपछि यहाँका अलैंची कृषक चिन्तित भएका छन् ।